Tọghata Oversize 2GB PST faịlụ n'ime Outlook 2003 Format - Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Tọghata Oversize 2GB PST faịlụ n'ime Outlook 2003 Format
iji DataNumen Outlook Repair iji tọghata Oversize 2GB PST faịlụ n'ime Outlook 2003 Format
Mara: must ga-enwerịrị Outlook 2003 ma ọ bụ ụdị dị elu karịa iji arụ ọrụ na ntuziaka a.
Mgbe ị zutere oversized Outlook PST faịlụ (PST faịlụ ahụ ruru ma ọ bụ karịa karịa 2GB) na-enweghị ike imeghe ya nke ọma na Microsoft Outlook 2002 ma ọ bụ ala nsụgharị, ị nwere ike iji DataNumen Outlook Repair ka i scanomi faịlụ ahụ, weghachite data niile dị na ya, ma chekwaa ha na faịlụ PST ọhụrụ na usoro unicode Outlook 2003 nke enweghị oke 2GB ọ bụla ọzọ. Mgbe ahụ ị nwere ike iji Outlook 2003 ma ọ bụ nsụgharị dị elu mepee faịlụ PST ọhụrụ ma nweta data niile na enweghị nsogbu.
Cheta na: Tupu n'ịtụgharị oversized PST faịlụ na DataNumen Outlook Repair, biko mechie Microsoft Outlook na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike gbanwee faịlụ PST.
Dika faili PST buru ibu, o gha adi na nhazi Outlook 97-2002. Yabụ, biko kọwaa usoro faịlụ ya na "Outlook 97-2002" na igbe ngwakọta n'akụkụ isi iyi faịlụ dezie. Ọ bụrụ na ịhapụ usoro ahụ dịka "Ekpebiri Nchekwa onwe", mgbe ahụ DataNumen Outlook Repair ga-i scanomi isi iyi buru ibu faili PST iji chọpụta usoro ya na akpaghị aka. Agbanyeghị, nke a ga-ewe oge ọzọ.
Site na ndabara, DataNumen Outlook Repair ga - echekwa data enwetara n’ime faịlụ PST ohuru akpọrọ xxxx_fixed.pst, ebe xxxx bụ aha isi iyi PST faịlụ. Ọmụmaatụ, maka isi PST faịlụ Outlook.pst, aha ndabara maka faịlụ ahụ achọrọ ga-abụ Outlook_fixed.pst. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
Dika anyi choro igbanwe faili PST buru ibu n'ime usoro Outlook 2003, anyi aghaghi ihu usoro nke PST a dobere na “Outlook 2003-2010” na igbe ngwakọta. n'akụkụ ofu faịlụ dezie igbe. Ọ bụrụ na ịtọ usoro ahụ na "Outlook 97-2002" ma ọ bụ "Ekpebiri Nchekwa onwe", mgbe ahụ DataNumen Outlook Repair nwere ike ghara ịhazi ma gbanwee faịlụ PST gị buru ibu.
Biko rịba ama na ị ga-enwerịrị Outlook 2003 ma ọ bụ ụdị dị elu karịa, ma ọ bụghị na usoro ntụgharị ahụ niile ga-ada.
pịa bọtịnụ, na DataNumen Outlook Repair ga start na-enyocha ma gbanwee isi iyi PST buru ibu. Ogwe ọganihu
Mgbe usoro a gasịrị, enwere ike weghachite isi iyi PST faịlụ ahụ ma gbanwee ya na faịlụ ọhụụ Outlook 2003 PST nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, ị nwere ike mepee faịlụ PST ọhụụ echekwara na Microsoft Outlook 2003 ma ọ bụ nsụgharị dị elu. You ga-ahụ ihe niile nke mbụ oversized PST faịlụ na-natara na nke ọhụrụ.
Na faịlụ PST ọhụrụ ahụ, ọdịnaya nke ozi na mgbakwunye ga-eji ihe ngosi ngosi dochie ya. Biko ịtụ ụdị zuru ezu na-ahụ n'ezie converted ọdịnaya.
Tọghata Oversize 2GB PST faịlụ n'ime Outlook 2003 Format